HomeWararka Maanta“Awalba 6 dhibcood iyadoo nalaga sareeyo ayaan figta u soo baxnay ,” Isco
Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Isco ayaa tibaaxay in guuldaradii 1-2-da ahayd ee ay kala kulmeen Sevilla, inay tahay mushkilad ay aad u fududahay ( sida xabad kiniin ah oo aad liqayso) sida loo ilaawaa, waxaanu ku adkaystay inay Real ka soo kaban karto , dibna u hanan karto kaalinta koowaad ee kala horeynta horyaalka La Ligaha.
“Guuldaro xun bay ahayd. Waxay gebi ahaanba bedeshay jawigii aanu ku jirnay marka loo eego laba ciyaarood ka hor sidaanu ahayn. Laakiin waxaanu nahay Real Madrid, waana shaqadayada inaanu samayno dib u curasho. Waxaanu aad ugu qanacsanahay inaanu si hawl yar dib ugu soo noqon karno hogaanka. Waxaa nalaga sareeyey lix dhibcood bilo uun ka hor , sidaas darteed waa maxay sababta aanaan kor ugu soo bixi karin markale,” ayuu yidhi Isco.
Kooxda Real ayay isku raaceen laba guuldaro oo foolxumi , midii Barcelona oo ay u raacday tan Sevilla mudo todobaad ah gudihii. Mashaqadaas oo aan hal mar haleelin shantii sanno ee ugu dambeeyey. Wuxuuse Isco ku adkaystay inay xooga saari doonaan kulanka Sabtida ee Rayo Vallecano.
“Ciyaartii noo xigtay baa iyana soo degdegtay, anagoo fiican, waxaanan ku soo laabanaynaa jidkii Guusha sidii aanu ahaan jirnay.” Ayuu hadal ku soo khatimay weeraryahanka Real Madrid ee Isco.
Taageereyaasha Man United Oo Lacag Ku bixiyey Farriin Hawada Loo Diray Oo Ay Ku Dalbadeen In La Eryo Moyes
Roma oo garaacday Ac milan iyo ciyaartoy Miralem Pjanic oo gool layaableh dhaliyey